De Boer ayaa ka xumaaday - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS De Boer wuu ka xumaaday
De Boer wuu ka xumaaday
Frank de Boer oo raali galin ka bixiyay taageerayaasha Atlanta United
Tababaraha sannadka ee Atlanta ayaa raaligelin ka bixiyay ka hor kulanka caawa ee CONCACAF Champions League ee ay la leeyihiin Monterrey. 0 oo kaliya si ay uga baxaan tartanka 3-1 oo keliya.
Nederland wuxuu sheegay in ereygan uu ka dhex muuqday dalkiisa.
De Boer ayaa ugu yeeray taageerayaasha "waxoogaa dharbaaxo ah" ka dib markii ay difaacdeen horyaalka MLS, United, ayaa goolka guusha u dhaliyay. Kulanka furitaanka guriga ayuu Axada la ciyaarayaa FC Cincinnati waxay dhalisay barbaro ay la gashay 1-1 oo ka soo horjeeda kooxda ballaarinta ee soo jiidatay taageerayaasha inta lagu guda jiro tartanka finalka.
Ka dib markii uu bedelay Tata Martino, De Boer ayaa ku bilowday tartan adag. gudaha Atlanta. Kooxda ayaa guusha gaartay waxayna barbareysay 5-tii kulan ee ugu horeysay ee MLS iyo UEFA Champions League, ka hor arbacada ay guusha ka gaareen Monterrey.
Atlanta waxay martigalisaa Philadelphia Union garoonkeeda Mercedes-Benz ee 19h. IYO BARNAAMIJKA 17 ( ku nool ESPN + ).
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/atlanta-united-fc/story/3799907/atlanta-united-boss-de-boer-apologizes-for-calling-teams-supporters-spoiled
OL-OL football: Anthony Lopes oo miyir beelay oo aan wax xasuusan karin - Olympique Lyonnais - FOOT 01